Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Tirada Askartii Afgambiga Turkiga oo la shaaciyay
Tirada Askartii Afgambiga Turkiga oo la shaaciyay
Jul 27, 2016 ANALYSIS 0
Sida ay xaqiijiyeen milatariga wadanku, isku dayga afgambigii dhicisoobay ee todobaadkii hore ka dhacay dalka Turkiga waxa ka qeyb-qaatay 8651 oo askari.
35 diyaaradaha miiga loo yaqaan iyo 37 ah kuwa qumaatiga u kaca ama helikoptarka la yidhaa.
Intaa waxa dheeraa 37 Taangi iyo 246 baabuurta ay saaranyihiin qoryaha daran-dooriga u dhaca.
Waxa isku daygaa ku qudh-baxay 246 qof (waa tirada baaburta qoryuhu saarnaayeen tiro le’eg oo dad ah)
Waxa ku dhaawacmay 2000 kun oo qof.
Wadarta guud ee ciidanka dalka waxay ka noqonayaan 1,5% (hal iyo badh),
Sida uu madaxweynaha dalkaasi sheegay waxay ka mid ahaayeen koox arga-gixiso ah oo taageerta wadaadka Fatihulla Gulen ee fadhigiisu yahay Mareykanka.
Rumeyso ama ha rumaysan Kamarad qabatay Naf ka baxaysa Habar ku dhimatay cusbitaal Shiinaha ku yaal Daawo Michelle Obama "Subaxwalba waxan kasoo toosaan Guri lagu dhisay dadkii la adoonsan jiray"